ABN fi miidiyaan jaraa 360 OPDOna akka warqeetti kunuunfatti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsABN fi miidiyaan jaraa 360 OPDOna akka warqeetti kunuunfatti.
ABN fi miidiyaan jaraa 360 OPDOn akka warqeetti kunuunfatti. Tapha siyaasaa hamaa qabsoo Oromoorratti taphachuuf jara kana caalaa isiii gargaaru hin jiru. Akkamitti?
Akkuma beekamu ABN finxaaleyyii saba Amaaraa ti. OPDOn jara kana abaaruudhaan Oromoo biratti fuula argachuuf hojjetti.
Dalagaadhaan amaanaa Minilik dhiisee deemee hojiitti hiikaa afaaniin ammoo sobdee ABN faa arraabsuudhaan siyaasaan hojjetama. Oromoon kana laalee ”OPDOn jabaatte” jedhee marsaa lammaffaa akka burjaaja’u barbaadu. Sabichi hogganoota qabsoo isaa hidhaa keessatti dagatee fi awwaala qaroo sabaa dhumaniirra dhaabatee diraamaa kanaan booji’amee OPDOf akka harka dhahu barbaadama. Oromoo dhaabota isaa haqaa irraa abdii kutachiisanii ana hin filattu taanaan abalutu si nyaachuuf dhufaa jira jechuun itti qoosuuf karoora baafatan.
Miidiyaaleen akka 360 ammoo OPDO dhaaba sabboonaa ABO waliin garaagarummaa hin qabne gootee lallabuudhaan burjaajii kanaaf humna dabalti. Jarri sun waan OPDO arrabsitu fakkaata malee hojii propaagaandaa qarshii miliyoonaan hin bitamne Cundhuuraaf hojjechaa oolti. Kanaafuu inumaa ESAT faa caalaa jaratu OPDOn akka Oromoo keessaa warra burjaaja’e biratti gabaa argattuuf ittanee hojjechaa jira.
Diraamaa diinni dirqama walii qoodee kallattii gara garaan sirratti hojjechaa jiru jalaa dammaqi! Qabsoo fi qabsaayota kee agartuu jaamsuuf itti duulamaa jiru ittifadhu. Wareegama waggaa 60f baaftee asiin geesse diinnan tapha duuriyyee sirratti taphatanii wayta si jalaa butataa jiran kanatti waa xixiqqoodhaan hin hin dagamin. Akkuma Rabbi guddisee si uumetti diinnan kee durattis guddadhuu mul’adhu!
Via Yaya Basher